မကြာမီတွင်စပိန်နိုင်ငံရှိ BLU R2 နှင့်တွေ့ဆုံပါ Androidsis
မကြာမီတွင်စပိန်နိုင်ငံရှိ BLU R2 နှင့်တွေ့ဆုံပါ
Rafa Rodríguez Ballesteros | | မိုဘိုင်း
ငါတို့ရဲ့လူမှုကွန်ယက်တွေအကြောင်းမင်းတို့ပြောနေတာ။ နောက်ဆုံးတနင်္ဂနွေနေ့ Androidsis သည် BLU terminal အသစ်များကိုသီးသန့်သိရန်လုံလောက်သည်. အမေရိကန်စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူ Valencia CF ၏အဓိကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ဖြစ်လာသည်
ထိုအခါစမတ်ဖုန်း၏ဤမိသားစု၏ပုံမှန်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် ဘလူး R2။ သမ္မာသတိ ရှိ၍ လှပသောဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုထားသော terminal တစ်ခု။ အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များအတွက် "ထိပ်တန်းတစ်ဆယ်" ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များ, ၎င်း၏ဒီဇိုင်းနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်စျေးနှုန်းထက်ပိုမို။
1 BLU ၏ R2 သည်အလယ်အလတ်တန်းစားကိုအနိုင်ယူရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်
2 BLU R2 သည်ဘားကိုမြှင့်မည်ဟုကတိပေးသည်
3 BLU R2 သည်ကောင်းတယ်၊
BLU ၏ R2 သည်အလယ်အလတ်တန်းစားကိုအနိုင်ယူရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်
Android မှာအလယ်အလတ်တန်းစားစမတ်ဖုန်းတွေအကြောင်းပြောဖို့ပိုခက်လာတယ်။ အပတ်တိုင်းနီးပါးသည်ကျွန်ုပ်တို့မိသားစုကြီး၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ရန်ကြိုးပမ်းသောပစ္စည်းအသစ်များစွာနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ၀ ယ်ယူသည့်အချိန်တွင်တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးနိုင်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လူအများစုမှခွဲခြားရန်ကွဲပြားခြားနားသောကုန်ပစ္စည်းများကိုရွေးချယ်သူများကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။
ကုန်ပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုငါတို့နိုင်ငံသို့ရောက်သောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့၏စက်ပစ္စည်းများ၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရုံတင်မကပါ။ ဒါဟာသိရဖို့ကောင်းတယ်, ဤကိစ္စတွင်အတွက် ရည်ရွယ်ချက်သည်ဖြစ်ရန်သာမကအခြားအရာများမှထွက်ခွာရန်ဖြစ်သည်။ အပြိုင်အဆိုင်စိတ်ဓာတ်ဖြင့် BLU ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်တင်ဆက်သည်။ သင့်အားရှုပ်ထွေးမှုမရှိဘဲယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသောစမတ်ဖုန်းများကိုစျေးကွက်ထဲသို့တင်သွင်းလာသည့်အမှတ်တံဆိပ်များမှထုတ်ကုန်များ။
BLU သည် ၄ ​​င်း၏စမတ်ဖုန်းများနှင့်အတူလက်ရှိကတ်တလောက်ထဲ၌ဘာပါဝင်သလဲ။ ငါတို့သိသည့်အတိုင်းကဏ္todayတွင်အသစ်အဆန်းတစ်ခုကိုရှာဖွေရန်ယနေ့မဖြစ်နိုင်သလောက်ရှိသည်။ ထို့အပြင်သူတို့၏ဆိပ်ကမ်းများအတွက်တရားဝင်ရရှိနိုင်သောရက်စွဲမရှိသေးပါ။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့စိတ်ချစွာသင်အာမခံနိုင်ပါတယ် BLU စမတ်ဖုန်းများသည်သတိမပြုမိဘဲမနေပါ.
အပေါ်အာရုံစူးစိုက် R2, ငါတို့နှင့်အတူဖုန်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းကြည့်။ အတူ panel ကိုအတူ 5,2 slightly အနည်းငယ်ကွေးချောနှင့်အတူ display ကို အဆုံးသတ်မှာ။ 720 x 1.280 resolution နှင့် 228 ppi။ ကိရိယာ၏ရှေ့ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂန္ထဝင်နီးကပ်သည့်အာရုံခံကိရိယာများအပြင်ဆန်းသစ်မှုအချို့ရှိသည်။ ရှေ့တွင်ဖော်ပြမည့်ရှေ့ကင်မရာသည်သင်၏ selfies ကိုအခြားအဆင့်သို့ရောက်သွားမည့် LED flash ဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်။
ပထမတစ်ချက်မှာ monobody စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးနှင့်တူသော်လည်းဤကဲ့သို့သောကိစ္စမဟုတ်ပါ။ အဆိုပါ BLU R2 တွင် ပြန်ဖြုတ်လို့ရ။ နိမ့်ကျတဲ့ထောင့်ကတဆင့်တွယ်ကပ်နေတဲ့သေးငယ်တဲ့အဖုံးကိုဖယ်လိုက်တယ်။ နှင့်ကဒ်အထိုင်မှလွယ်ကူစွာဝင်ရောက်ခွင့် MicroSDနှင့် SIM ကဒ်နှစ်ခု။ ပိုမိုလွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်သောစမတ်ဖုန်းကိုနှစ်သက်သောသူများနှင့်မနှစ်သက်သောသူများရှိသည်။ သို့သော်ဤကိစ္စတွင်သင်သည်ခြားနားချက်ကိုသတိမပြုမိပါ။
BLU R2 သည်ဘားကိုမြှင့်မည်ဟုကတိပေးသည်
ကင်မရာများ၏အပိုင်းသည်ထူးခြားသောအရာတစ်ခုအတွက်သပိတ်မှောက်သည်။ ဒီ terminal ထဲမှာ ရှေ့ကင်မရာနှင့်နောက်ကင်မရာမှာအတူတူပင်ဖြစ်သည်။ နှစ် ဦး စလုံးရှိသည် ၅ megapixels။ ထို့အပြင် နှစ်ခုလုံးမှာ LED flash ရှိသည်။ အရည်အသွေးမြင့်တဲ့ selfies (သို့) ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ဖို့သင့်မှာအကြောင်းပြချက်မရှိပါဘူး။ ရှေ့ကင်မရာတွင်အသုံးပြုသူများစွာအော်ဟစ်နေသည့်အရာ၊ အရည်အသွေးမြင့်မားမှုနှင့် resolution တို့နှင့် BL2 ကကမ်းလှမ်းသည်။
နောက်ဘက်နှင့်သက်သောင့်သက်သာရှိပြီးစီးပွားရေးအခြေအနေကောင်းမွန်သောနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရသည် အဆင့်မြင့်လုံခြုံရေးလက်ဗွေဖတ်စက်။ ဖုန်းကိုသော့ခတ်ခြင်း၊ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့အားကျွန်ုပ်တို့၏လက်ဗွေများကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်ငွေပေးချေခြင်းပလက်ဖောင်းများတွင်စစ်ဆေးခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
BLU R2 ရဲ့အတွင်းပိုင်းကဘာလဲ 1.3GHz Quad Core mediatek၏ဗိသုကာနှင့်အတူ 64 -bits။ မှတ်ဉာဏ် 2GB RAMနှင့် မှတ်ဉာဏ် ၏အတွင်းပိုင်း 16 GB ကို 3GB RAM နှင့် 32GB သိုလှောင်မှုဗားရှင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ နောက်ခံရှိအပလီကေးရှင်းများနှင့်ဂိမ်းကစားသူများနှင့်ပင်လျှင်စမတ်ဖုန်းကိုချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်စေသည်။
ဘက်ထရီကျွန်ုပ်တို့စမတ်ဖုန်းများကိုအထူးကြပ်မတ်အသုံးပြုခြင်းကြောင့်အလွန်အရေးကြီးသောအရာသည်တန်းတူဖြစ်သည်။ အချို့ 3.000 mAh ဘက်ထရီ လည်ပတ်မှုစနစ်နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သော optimization အတူတကွကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်နေ့လုံး charger ကိုသတိမပြုမိရန်ဆိုလိုသည်။ အားသွင်းအပြည့်နှင့်မြင့်မားသောအသုံးပြုမှုနှင့်အတူထိုကိရိယာသည်တစ်နေ့တာနှောင်းပိုင်းတွင် 'ရှင်သန်' နိုင်သည်။ ရရှိနိုင် 20% သို့မဟုတ် 25% ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အတူပင်။
BLU R2 သည်ကောင်းတယ်၊
အဆိုပါ BLU R2 ရှိကြောင်းထောက်ပြရန်မှတ်စုအဖြစ် အန်းဒရွိုက် 7.0 Nougatနှင့်ဗားရှင်းအသစ်ကိုရရှိနိုင်လျှင်ချက်ခြင်းအသစ်ပြောင်းရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ အတိုချုပ်ပြောရရင် R2 ကကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းတာက Android စမတ်ဖုန်းတွေရဲ့အလယ်အလတ်တန်းစားထဲကအကောင်းဆုံးပါ။ သို့သော်ယေဘူယျစည်းမျဉ်းအရကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့သောသူများကိုရရှိရန်စရိုက်လက္ခဏာအချို့ကိုစွန့်လွှတ်ရမည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကထည့်သွင်းရန်အိမ်၏အသေးစိတ်ဖြစ်ပါတယ် တစ်ခုချင်းစီကို box ထဲမှာအထဲမှာမျက်နှာပြင်ကာကွယ်အဖြစ် silicone နောက်ကျော shell ကို။ ခြွင်းချက်မရှိတန်ဖိုးထားခံရပြီး၎င်းသည်ပြိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သင့်သည်။ စျေးနှုန်းကိုအလွဲသုံးစားပြုခြင်းမရှိပဲအရည်အသွေးနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်ထုတ်ကုန်ကိုထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည့်ဥပမာတစ်ခု။
စမတ်ဖုန်းရဲ့ကဏ္ aspects အားလုံးမှာမျှတမှုရှိ၊ မရှိဆုံးဖြတ်မယ့်အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာတယ်။ တစ်ဖက်သို့မဟုတ်တစ်ဖက်မှလက်ကျန်ငွေကျဆင်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်ပစ္စည်း၏ဈေးနှုန်း။ ပြီးတော့အဲဒါကိုငါတို့ဘာတွေပေးရမယ်ဆိုတာသိပြီ ဘလူး R2 ကိုယူရို ၁၅၀ အောက်သာရှိသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခက်ခဲသောကဏ္sector၌ပင်အောင်မြင်မှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည်။
operating system အန်းဒရွိုက် 7.0 Nougat
ဖန်သားပြင် ၅.၂ လက်မ HD Curved Glass Display
Processor ကို Quad Core 1.3 GHz 64Bit ဖြစ်ပါတယ်။
ရှေ့ကင်မရာ LED မီးနှင့်အတူ 13MP
နောက်ကင်မရာ 13MP BLU Final Touch ဖြစ်သည်
ဘက်ထရီ 3.000 mAh ဘက်ထရီ
စြေး 149 €
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » မကြာမီတွင်စပိန်နိုင်ငံရှိ BLU R2 နှင့်တွေ့ဆုံပါ
Hector Aldo Herrera - ဗဲလီဇာ ဟုသူကပြောသည်
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်တွင် Blu ၏မော်ဒယ်များရှိခဲ့ပြီးထိုအတွေ့အကြုံသည်မကောင်းခဲ့ပါ။ ထိုအရာသည်ထိုယူနစ်တစ်ခုသာဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
Hector Aldo Herrera - Veleizánအားပြန်ကြားခြင်း
ကျွန်တော့်မှာ Blu စမတ်ဖုန်းကို ၆ လရှိပြီ။ အမှန်တရားကတော့ထူးခြားတဲ့ဆဲလ်ဖုန်းဖြစ်တယ်၊ ဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းရိုက်တယ်၊ ဘက်ထရီသက်တမ်းကအရမ်းကောင်းတယ်၊ လည်ပတ်မှုရဲ့စီးဆင်းမှုကအရမ်းကောင်းတယ်၊ အပြီးသတ်ကောင်းမွန်တယ်၊ လက်ဗွေဖတ်တဲ့သူရှိတယ် ... အခုဆက်လုပ်နေရင်၊ ငါ့လက်ကိုင်ဖုန်းကအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မယ်။
ငါ၌3Blu ရှိခဲ့သည်။ Blu သည်ဘာမှမထုတ်လုပ်သည်ကိုသူရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရမည်။ သူ၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုသူတွေ့သောတရုတ်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတွင်ထည့်လိုက်သည်။ ဤတွင်သူ၏ကျယ်ပြန့်သောကတ်တလောက်၊ ဖခင်နှင့်မိခင်တို့မှဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ၎င်းသည်၎င်းသည်ထုတ်လုပ်ခြင်းမရှိသောကြောင့်၊ အပိုပစ္စည်းများသို့မဟုတ်အဆင့်မြှင့်တင်မှုများမရှိခြင်း၊ ဖုန်းသုံးလုံးစလုံးတွင် software နှင့် hardware ပိုင်းဆိုင်ရာပြissuesနာများမဖြေရှင်းနိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်အရေးမကြီးပါ။
အဆိုးဝါးဆုံးသော Vivo Air Lte သည်တစ်နေ့တွင်ဘာမျှမလိုအပ်သောကွင်းဆက်သို့သွားပြီးတံဆိပ်ထက်ကျော်လွန်သွားသည်။ Blu ကိုဆက်သွယ်ပြီးသောအခါဖုန်းကို reset လုပ်ရန် rom ကိုတောင်းဆိုခဲ့သည်။ သို့သော်သူတို့တွင်အသုံးပြုသူဆော့ဝဲလ်မရှိပါ။
ကံကောင်းထောက်မစွာပဲ Wiko မှာသူ့ရဲ့တူညီတဲ့ဖုန်းရှိတယ်ဆိုတာ Blu ရဲ့ Vivo Air ပါ၊ Wiko မှာ Highway Pure ဆိုတဲ့တရုတ်လူမျိုးရှိတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ သူကထုတ်လုပ်သူ၊ လိုဂိုစသည်ဖြင့်ရော၊ ခြားနားချက်မှာ Wiko သည်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး၎င်း၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်မည်သည့်ကုမ္ပဏီကဲ့သို့မဆို၎င်း၏ဖုန်းများပြန်လည်စတင်ရန် software ရှိသည်။ ရိုးရှင်းပြီးရိုးရှင်းပြီးထိရောက်သောအမှုဆောင်အရာရှိသည်ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းကို ၅ မိနစ်အတွင်းပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့သည်။ Blu တွင်ဖြေရှင်းချက်သည်ဖုန်းကို Miami သို့ပို့ခြင်းဖြင့်သုံးစွဲသူ၏ကုန်ကျစရိတ်များကိုပေးသည်။ ဒါကြောင့်ငါ Wiko ကိုဖွင့်ခြင်းနှင့်ကပြောပါတယ်တဲ့ Blu ရှိသည်။ Blu ကိုကျွန်တော်မထောက်ခံဘူး၊ ငါပြproblemsနာတွေမကြုံမချင်းသူတို့ဘာမှမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးဆိုတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ တူညီတဲ့စျေးနှုန်းအတွက်သင့်မှာ Xiaomi ရှိတယ်၊ ပိုကောင်းတယ်၊ ပိုကောင်းတယ်၊ အမြဲတမ်းဆော့ဗ်ဝဲနှင့်မွမ်းမံချက်များရှိသည်။
Google Camera HDR + သည် RAW အထောက်အပံ့နှင့်အခြားတိုးတက်မှုများကိုစတင်ခဲ့သည်
Android 8.0 Oreo ကိုအခြေခံထားတဲ့ Android Wear beta ကို Google ကြေငြာ